Veruzhinji Votsigira Mutongo Wakapihwa vanaNyakuvhima Nzou Zvisiri paMutemo kuHwange
Gunyana 26, 2013
Vanovhima zviri kunze kwemutemo vanonzi vakaisa muchetura mumvura inonwiwa nenzou dzemuHwange National Park
WASHINGTON DC — Kupiwa mutongo kwevarume vatatu neChitatu nedare ramejastiriti muHwange mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuvhima zviri kunze kwemutemo, uye kuuraya nzou nedzimwewo mhuka nemuchetura wecyanide, kuri kutambirwa nevakawanda sechiitiko chinogona kumisa nyaya dzekuvhima zvisina mvumo.
Robert Maphosa, Thabani Zondo naDean Tshuma vakatongerwa kugara mujeri kwemakore ari pakati pegumi nemashanu negumi nematanhatu vachishanda zvakaomarara, uye vakanzi vabhadhare mari inosvika mazana masere ezviuru zvemadhora panosvika zvita wegore rino.
Varume vatatu ava nevamwe vavo vashanu vasati vamiswa pamberi pedare vanonzi vakauraya nzou dzinodarika makumi masere vachishandisa muchetura we cyanide muHwange National Park.
Dambudziko rekuurayiwa kwemhuka zviri kunze kwemutemo rinonzi nenyanzvi dzezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza idambudziko rinogona kusiya nyika isisina mhuka dzinokosha panopera makore gumi nemashanu.
Asi vamwe vanoti kusawaniswa kwevagari cheuviri kubva mumari inowanikwa nekushanyirwa kwenyika ndezvimwe zvezvinhu zvinoita kuti vamwe vagari vasaona kukosha kwekuchengetedzwa kwemhuka nezvimwe zvakadaro.
Gweta rinoshanda nesangano remagweta anochengetedza zvakatikomberedza, reZimbabwe Environmental Law Association, VaMtuso Dhliwayo vati vanofunga kuti mutongo uyu uchatyisidzira vamwe vane pfungwa dzekuvhimawo zviri kunze kwemutemo.
VaDhliwayo vatiwo zvichanetsa kubvisa muchetura uyu mumatsime sezvo zvichida mari yakawanda, iri kushaikwa neboka reParks and Wildlife.
Sachigaro weZimbabwe Conservation Task Force VaJohnny Rodrigues vati vanofunga kuti mutongo uyu uri pasi zvikuru kana zvichienzaniswa nezvakaitwa nembavha idzi.
VaRodrigues vati panofanirwa kuitwa dzidziso yakasimba kuitira kuti vanhu vazive kuti vanokwanisa kugarisana zvakanaka nemhuka. Vatiwo vanhu vanofanirwa kuwaniswa cheuviri kubva muzvirongwa zvekuchengetedzwa kwemhuka kuitira kuti vazive kuti zvinopa upenyu.